Oromo News 04.08.2021 | KWIT
Oromo News 04.08.2021
By Fatiya Adam • Apr 8, 2021
Governor Iowa Kim Reynolds guyyaa har’aa waa’e talaali corona virus irraa dubbatanii jiru. Reynolds akka jetteeti jiraattoni Iowa parsantii 44% kan wagga 18 fi sanii ol ta’an talaali corona virus akka fudhatani jiran himan. Lakkoofsi nama talaali kan fudhata kan umriin isaa 65 fi sanii ol ta’an kan harka lamaan dabalata ta’eedha. Akka talaali waliigalatti Iowa lakkoofsa 9th kan jirtuudha. Reynolds akka jetteti garee muraasa warra ta’aniifi barattoota college kan ta’an akka talaali kun kennamuuf karoorfatani jiru. Reynolds akka jetteti talaali corona virus dhaaf qarqaarsa guddaa kan aragtan osoo hin tain namni virus dhaaf talaali kana kan fudhatan beekudhaf passport laalun akka dhoorka tae himan.
Governor Republican kan biraatis talaalidhaaf passport akka hin fayyadamne dhoogani jiran. Akkasumas Governor Kim Reynolds warra seera baasuufi kan hojiirra oolchulle irrati tarkaanfi fudhachuuf akka qophoo ta’an himan.
White House torbaan kana jalqaba irrati akka jedhetti talaali kanaf passport akka hin barbaachifne hime. Akkasumas kaapaanidhan dhunfaa talalaali murteessuf kan fayyadaman tauusa yeroo biraa kan laalamu ta’a.
Kuni kanumaan osoo jiru, deparmantiin mana fayyaa Iowa akka gabaasetti guyyaa har’a sababa Covid-19 namni 13 akka due ibse, namni haarawa qabame ammo 750 ol dha, namni 23 Woodbury County keessati kan qabameedha.
Akka state waliigalatti qorannoo seati 24 keessati godhame dhukubichi akka dabalaa jiru himan.
Akka virus kun jalqabe irraa namni waliigalatti due 5,835 dha, kana keessa parsenti 40% long term facilities keessa kan dhufeedha.
Oromo News 04.07.2021
By Fatiya Adam • Apr 7, 2021
Itti gaafatamtooni olaanon police naanno Iowa human police naannicha fi Meesha waraana dabaluun kan bara darbe 2020 irraa harka caalatti human dirqamsiisu akka fayyadaman odeefannoon keessodhan argame tokko ni ibsa.
Akkaata gabaasa Iowa Department Kan dame nageenya balaa dingataa kanna irrati kan shakkaman makiinadhaani fi miilan yeroo baaye officer jalaa bara 2020 keessati baaye akka dheessan himan.